“Dimuquraadiyad, sida aan ognahay ma tahay horumarkii ugu dambeeyay ee ay dowladdu ku tallaabsato?”
Magacaygu waa Kate Sykes, waxaanan u tartamayaa Golaha Degaanka ee Portland ma ahan hammi mustaqbalkeyga, ama jaranjaro aan u maro barkad weyn, laakiin waxaan u ahay ficil wax u qabashada dadka Portland – kuwa halkan ku nool hadda, iyo kuwa halkan ku noolaan doona mustaqbalka. Xilliga aan wajaheyno dhibaato dhaqaale oo aan horay loo arag, hanjabaad deegaan, hubanti la’aan xagga anshaxa ah, iyo qalalaase bulsho, ma qiyaasi karo wax kale oo aan qabanayo.
Waxaan ku dhashay Portland waxaan ku barbaaray Harrison, Maine anigoo ah cunug ay dhaleen laba macallin oo wax ka dhiga iskuullada dowladda kuwaasoo ii qaabeeyey muhiimada ay leedahay inaan bulshada wax ugu celiyo. Markuu jiray 78 sano, aabbahay wuxuu weli u adeegaa sidii Xulufiyaha iyo Dab-demiska magaalada Harrison, hooyadayna had iyo jeer waxaa lagu xisaabtami karaa inay soo uruuriso mutadawiciin, ama wax u dubto saacadda bulshada ee kaniisadda.
Waxaan ka shaqeynayey 18 sano maamulka daryeelka caafimaadka iyo maareynta xirfadaha. Aniga oo ah Maamulaha Barnaamijka ee Degenaanshaha Daawada Qoyska ee Seattle, waxaan isku dubariday waxbarashada dhakhaatiirta deggan saddex xarumood oo magaalada gudaheeda ah oo daryeel u fidiya bulshooyinka Dhaladka ah ee Mareykanka, Latin, iyo Madow. Siyaasadayda iyo firfircoonideyda waxaa qaabeeyay dhakhaatiirta, kalkaaliyayaasha caafimaadka, shaqaalaha bulshada, macalimiinta, PSRs, abaabulayaasha ururada, iyo khubarada caafimaadka bulshada ee aan kala soo shaqeeyay wadada. Kalluumeysiga ayaa qabtay inta kale.
Hadda waxaan hayaa xirfad labaad anigoo ah qoraa madax banaan iyo tifaftire. Waxaan xubin ka ahay Ururka Qorayaasha Qaranka waxaanan xubin ka ahay isla markaana hore u ahaan jiray Wada-guddoomiye ka tirsan Koonfurta Maine Socialist of America (DSA). Sidoo kale waxaan ahay abaabulaha ololaha ‘People First Portland’ si aan udhameeyo shanta codbixin codbixinta Nofeembar 2020 taas oo ka dhigeysa baahiyaha maadiga ah ee dadka ka hor dalabyada macaashka shirkadaha.
Waan jeclahay kaymaha Maine xilliyada oo dhan. Marka aanan shaqeynin, waxaad i heli kartaa anigoo ku wata baaskiil buuraha, barafka, ama istaaga wabiga anigoo dhageysanaya nafsadeyda. Waxaan ku noolahay Deering Center aniga iyo seygeyga iyo hageheena kalluumeysiga ee afarta lugood leh, Metolius.